Sofisma (silamo) - Wikipedia
Ny sofisma dia fitambaran' ireo finoana sy fanao ary fomba fijery mistika sy ezôterika ao amin' ny tontolon' ny fivavahana silamo nanomboka tamin' ny tonjato faha-11. Na dia Sonita ny ankamaroan' ny Sofy (mpanaraka ny sofisma) voalohany dia tsy sampana manokan' ny finoana silamo ny sofisma satria ahitana Siita sy mpino silamo hafa koa. Avy amin' ny teny arabo hoe تصوّف / taṣṣawuf ny hoe sofisma. Ny sofisma dia lalanam-pisandratan' ny fanahy amin' ny alalan' ny fianarana atao hoe tassawuf na tariqa.
Ao amin' ny fanambaràn' ny Kor'any sy ny ohatra nasehon' i Mohamady no misy ny fototry ny sofisma, ka azo atao ny milaza fa efa teo izy hatramin' ny fiantombohan' ireo fanambaràna ara-paminanian' ny finoana silamo. Tao amin' ny sonisma aloha no nahitana azy avy eo ao amin' ny siisma koa na dia miseho amin' ny fomba samy hafa izy ao amin' ireo sampan' ny finoana silamo ireo.
Hatramin' ny fiantombohan' ny finoana silamo dia nisy Olema sy mpanam-pahaizana silamo toa an' i Ibn Khaldûn nanohitra izay nolazain' izy ireo ho fiviliana na fivaon' ny sofisma, ka nanaovany fitsikerana momba ny fanao ara-pivavahana sy amin' ny tenim-pinoana (dôgma). Ankehitriny dia manohitra tateraka ny sofisma ny oahabisma.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sofisma_(silamo)&oldid=1000314"
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2021 amin'ny 07:00 ity pejy ity.